सिके राउतको उत्तेजक भाषणः सत्तामा पुगेका जरासन्धहरुलाई समाप्त पार्नुपर्छ - Sima Post
सिके राउतको उत्तेजक भाषणः सत्तामा पुगेका जरासन्धहरुलाई समाप्त पार्नुपर्छ
सिराहा । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पार्टीद्वारा जारी किसान आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन कार्यकर्तालाई सन्देश दिएका छन् । सिरहा सदरमुकाममा भाषण गर्दै उनले सांसद र मन्त्रीलाई जनकारवाही गर्ने चेतावनी पनि सुनाए ।
पार्टीद्वारा आज आयोजित सभामा राउतले उत्तेजक भाषण गरेका थिए । उनले मन्त्री, सांसद र नेताहरुलाई भौतिकरुपमा नै समाप्त पानुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।
राउतले भने, ‘जसरी जरासन्धलाई बलरामले कोदालोले बध गरेका थिए । त्यसरी नै तपाईं किसानहरुले सत्तामा पुगेका जरासन्धहरुलाई कोदालोले अन्त्य गर्नुपर्छ । किसानले आफ्नो ताकत देखाउनुपर्छ ।’उनले थपे, ‘एक-दुई टकाको दाना खाएपछि बगरा (चरा) लाई मार्ने प्रयास गर्छौं । तर अबौंको मल खाने कृषिमन्त्रीलाई के गर्ने ? यो कुरा तपाईं किसाहरुले बुझनुपर्छ ।’
जनमत पार्टीले विभिन्न माग राखेर मधेसका सबै जिल्लाको सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेको छ ।साभार नेपालप्रस
नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मालाई कालोमोसो दले